မောငျ(စှယျစုံကမျြး): Photoshop CS5 Full Registed (Portable)
Photoshop CS5 Full Registed (Portable)
Gmail ထဲ သူငယ်ချင်းတယောက် အကူညီတောင်းထားလို့ Photoshop CS5 လေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောဝဲလေးကတော့ portable လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ install စရာမလိုပဲ မောက် နဲ့ ၂ ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ သုံးလို့ရပါပြီ....။ Photoshop ဆို အားလုံးသိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အထွေထူး ရှင်းပြစရာမလိုလောက် ဘူးထင်ပါတယ်။ Registered ပြီးသားမို့ ဒေါင်းပြီးတာနဲ့ full version သုံးရပါပြီ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 165.25MB ပဲ ရှိပါတယ်။ Photoshop လေးနဲ့ ပုံတွေ အလန်းလေးဖြစ်အောင် ဖန်တီးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံး အလွယ် ရယူနိုင်အောင် ဆိုဒ် ပေါ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိကျနော် သုံနေတဲ့ ဆောဝဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Photo ဒီဇိုင်းသမားဆို မရှိမဖြစ်ဆောဝဲလေး ဆို လည်း မမှားပါဘူး။
Author Zaw Min Than at 8:32:00 PM
My feelings said...
chaw chaw said...
အကို CS5က ဖွင့်ပြီးစစချင်း TOOL တစ်ခုခုကိုနှိပ် လိုက်တာနဲ. FIRE FOX BROWER ဘဲပေါ် လာတယ်ပြီး၇င် ဆော့ဝဲပါ အလိုလိုပိတ်သွားတယ် တစ်ခုတစ်၇ံ ပုံေ၇ွးလိုက်တာနဲ. ဆော့ဝဲက ငြိမ်သွားတယ် ပိတ်လို.လဲမ၇တော့ဘူး ကွန်ပြုတာကိုပိတ်ပစ်မှ ၇တော့တယ် Window764 bit ပါအကို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘာလုပ်၇မလဲဆိုတာပြောပြပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်